Wararkii ugu dambeeyay ee dagaalka gobolka Tigray | dalkaan.com-Wararka ugu danbeeyay ee soomaaliya
Home Warkii Wararkii ugu dambeeyay ee dagaalka gobolka Tigray
Mekelle (Dalkaan.com) – Milateriga Itoobiya ayaa qorsheynaya in ay gudaha u galaan caasimadda gobolka Tigray ee Mekelle, ayna “ka takhalusaan” xoogagga TPLF, sida uu sheegay sarkaal sare oo ka tirsan militariga, xilli ay socdaan dadaallo diblomaasiyadeed ee lagu soo afjarayo colaadda waqooyiga dalkaas.
Taliye ku xigeenka ciidamada difaaca Itoobiya General Abebaw Tadesse oo waraysi siinayay warbaahinta ku hadasha afka dawlada ee Fana ayaa sheegay in ay sii wadayaan dagaalka ka dhanka ah kooxda TPLF.
Waxa uu sheegay inay isku diyaariyeen sidii ay ‘gebi ahaan’ meesha ugu saari lahaayen cududda militari ee TPLF, isagoo intaas raaciyay inaysan la gorgortami doonin.
Afhayeenka kooxda TPLF Getachew Reda ayay sheegtay wakaaladda wararka ee Reuters oo qortay warbixintaan inaysan u suurta gelin in uu wax faah faahin ah ka bixiyo hadalka sarkaalka ciidanka Itoobiya.
Toddobaadkan laba diblomaasi oo Maraykan ah ayaa u duulay Addis Ababa si ay u riixaan xabbad-joojinta, iyagoo isku dayaya inay dhisaan calaamado muujinaya kalsoonida xiriir dhex mara dhinacyada dagaallamaya, oo ay ku jiraan sii deynta maxaabiista siyaasadeed.
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden, Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay, António Guterres iyo Xafiiska Xuquuqda Aadanaha ee Qaramada Midoobay ee (OHCHR) ayaa walaac ka muujiyay duqeymaha cirka ah ee lagu eedeeyay in ciidamada Itoobiya ay ka geeysteen gobolka Tigreega.
Kooxda TPLF ayaa sheegtay in Ra’isul Wasaare Abiy Ahmed uu doonayo in uu soo afjaro nidaamka federaalka ee ku salaysan qoomiyadaha, halka Abiy uu sheegay in TPLF ay dooneyso in ay la wareegto awooddii qaran ee ay hore u haysay.
Falcelin ka dhalatay weerar loo arkay inuu Fahad ku qaaday beesha...
Muqdisho (Caasimada Online) – Fahad Yaasiin ayaa maanta markii ugu horeysay ka hadlay kiiska Ikraan Tahliil oo nolol iyo geeri aan lagu arag in...
Xog: Safiirka Somalia ee Kenya ‘oo isaga baxay’ shir isugu yeeray...
Deg deg Shirka Golaha wadatashiga oo Furmay, Qodob halis ku...
Wakiilka Matthijs de Ligt oo albaabada u furay u dhaqaaqista xidigan...